အဘရေ…လိမ်မယ်ဆိုလည်း ဒီလိုလိမ်ဗျ Disguise | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » အဘရေ…လိမ်မယ်ဆိုလည်း ဒီလိုလိမ်ဗျ Disguise
အဘရေ…လိမ်မယ်ဆိုလည်း ဒီလိုလိမ်ဗျ Disguise
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 5, 2010 in World News |7comments
ကနေဒါ အာဏာပိုင်များဟာ အဲယားကနေဒါ လေယာဉ်တစင်းပေါ်ကို ခရီးသည်တဦး အဖိုးအို အသွင် ရုပ်ဖျက်တက်ခဲ့တဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတခု လုပ်နေတယ်လို့ စီအန်အန်သတင်းဌာနက ဆိုပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်နေ့က ဟောင်ကောင်မှ ကနေဒါနိုင်ငံ ဗင်ကူးဗားမြို့ကို ထွက်ခွာလာတဲ့ အဲယားကနေဒါ ခရီးစဉ်အမှတ် AC018 မှာပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကနေဒါနယ်စပ်လုပ်ငန်း အေဂျင်စီရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ မယုံနိုင်စရာ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှု တခုလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရုပ်ဖျက်ဟန်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတဦး ဟောင်ကောင်မှ ထွက်ခွာလာတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပါလာတယ် အဲယားကနေဒါ လုံခြုံရေးဌာနကနေ သတင်းရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခရီးသည်ကို အစောပိုင်းထဲက နုပျိုတဲ့လက်များပိုင်ရှင် ကော်ကေးရှန်းနွယ်ဖွား လူဖြူအဖိုးကြီးတယောက် အဖြစ်သတိပြုမိခဲ့ကြတာပါ။ လေယာဉ်ပျံသန်းနေတုန်း သူဟာအိမ်သာထဲကို ဝင်သွားပြီး အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် အာရှဖွားအမျိုးသား တယောက်အသွင်နဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ဆင်းသက်ပြီးနောက် သူ့ကို ကနေဒါနယ်စပ်ဌာန အရာရှိများက လေယာဉ်ကနေ သူတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်မဲ့ ခိုလုံခွင့် လျောက်ထားသူများ အကာအကွယ်ပေးရေး နေရာဆီကို စောင့်ကြပ်လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
သူ့မှာအိတ်တလုံးပဲ ပါတယ်လို့ အစပိုင်းမှာပြောခဲ့ပေမဲ့ လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများက နယ်စပ် အရာရှိများကို သူ့ဟာလို့ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ နောက်ထပ် ခရီးဆောင်အိတ်နှစ်လုံးကို ပေးအပ် ခဲ့ပါတယ်။ အိတ်တလုံးမှာ သူ့အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်များပါရှိပြီး နောက်အိတ်တလုံးမှာတော့ လက်အိတ်တစုံပါရှိပါတယ်။ တတိယအိတ်မှာတော့ ကော်ကေးရှန်းဖွားအဖိုးကြီးပုံ စီလီကွန်အမျိုးအစား ဦးခေါင်းနဲ့လည်ပင်းစွပ်တွေပါတဲ့ ရုပ်ဖျက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ အညိုရောင် သားရေကက်ဦးထုပ်၊ မျက်မှန်နဲ့ ဆွယ်တာအင်္ဂျာီတထည် တို့ပါဝင်ပါတယ်။ သူရုပ်ဖျက်သရုပ်ပြတာ မြင်ခဲ့ရတဲ့အရာရှိများက တကယ့် ကော့ကေးရှန်းအဖိုးကြီးတဦးနဲ့ တူတဲ့အပြင် သွားလာလှုပ်ရှားမှုံတွေကလည်း ချွတ်စွပ်ပဲလို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ သူက လေယာဉ်ပေါ်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး တက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ နာရီအတော်ကြာမှ မျက်နှာဖုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲတယ်လို့ ဝန်ခံချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စုံစမ်းမှုလုပ်နေကြောင်းကို အဲယားကနေဒါလေကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပီတာဖစ်ဇ်ပတ်ထရစ်က အတည်ပြုလိုက်ပြီး ဟောင်ကောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ မထွက်ခွာခင်မှာ ဟောင်ကောင်ဇာတိ ခရီးသည်များ ပြုလုပ်ရမဲ့ တရုတ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ဟောင်ကောင်ပတ်စ်ပို့ စီစစ်ရေး အပါအဝင် စစ်ဆေးမှုအကြိမ် အတော်များများကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ ဟောင်ကောင် အရာရှိများကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သတိပြုမိကြောင်းနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ့မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကနေဒါနယ်စပ် ဒေသဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ဂျင်နီဖာဗိုကွီးက ကျမတို့ ကနေဒါနိုင်ငံထဲကို ရုပ်ဖျက် ဟန်ဆောင်ပြီး အဲယားကနေဒါ လေယာဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူတဦးကို အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်နေ့တုန်းက ကြားဖြတ်ဖမ်ဆီး ရခဲ့ပါတယ်လို့ အတည်ပြုချက်ပေးပါတယ်။ ကနေဒါနယ်စပ်ဌာန ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ နိုင်ငံခြားသားတဦး လောလောဆယ် ရှိနေတယ်လို့ သူမကပြောပါတယ်။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာ ကြားနာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ နယ်စပ်ဌာနအနေနဲ့ ဒီကိစ္စအတွက် နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကို မထုတ်ဖော်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအက်ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များအရ သူမအနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မပေးနိုင်တော့ပါဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမပြောနိုင်တာက ကနေဒါနယ်စပ် အရာရှိများဟာ ဗင်ကူးဗား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာလေကြောင်းများနဲ့ရောက်လာကြတဲ့ ခရီးသည်အားလုံးကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ကနေဒါနယ်စပ်ဌာနဟာ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ နိုင်ငံတကာ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး တာဝန်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ကျမတို့နယ်စပ်များနဲ့ ကွန်မြူနတီများ လုံခြုံစိတ်ချ ရေးအတွက် နီးနီးကပ်ကပ် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ တိကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်းကို သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ရရှိခြင်းဟာ နယ်စပ်ဒေသဘေးကင်းရေးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများကနေ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်ဌာနအနေနဲ့ ဘယ်အချိန်၊ ဘာကြောင့် အဲဒီလူ ရုပ်ဖျက်ခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုလေယာဉ်ပေါ်တက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ သံသယအဖြစ်ခံရသူဟာ အခြားခရီးသည်တဦးရဲ့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်လက်မှတ်နဲ့ တက်ခဲ့တာပါ။
သူနဲ့တကဲ့အမေရိကန်ခရီးသည် (မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၅၅) တို့ဟာ လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့် လက်မှတ်ကို အလဲအလှယ်လုပ်၊ မကြာခဏ လေကြောင်းခရီးသွားလေ့ရှိသူများသုံးတဲ့ အကြွေးဝယ်ယူခွင့်ကတ်ကို အသုံးပြုပြီး လေယာဉ်ပေါ်တက်ခဲ့တာလို့ ယုံကြည်ရတယ်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
November 5, 2010 11:46 a.m. EDT
Atlanta, Georgia (CNN) — Canadian authorities are investigating an “unbelievable” incident in whichapassenger boarded an Air Canada flight disguised as an elderly man, according toaconfidential alert obtained by CNN.
“We can confirm that officials from the CBSA metapassenger arriving off AC018 Hong Kong to Vancouver on October 29 and the matter is still under investigation,” said Air Canada spokesman Peter Fitzpatrick, who noted that “there are multiple identity checks before departure at the Hong Kong international airport, including Chinese government-run Hong Kong passport control, which Hong Kong originating passengers must undergo.”
Jennifer Bourque, regional communications officer for the CBSA, confirmed that “we intercepted an individual, on October 29, attempting to enter Canada under false pretenses on-board an Air Canada flight.”
“CBSA can confirm that the foreign national is currently in CBSA detention,” she said. “The individual will present before an IRB hearing. The officials of the CBSA will not disclose further information on this file.”
“However, I can tell you that CBSA officers examine all passengers arriving on international flights at Vancouver International Airport,” she said. “CBSA works closely with air carriers and local, national and international law enforcement partners, to ensure the safety of our borders and our communities. Getting the right information at the right time isakey element in keeping Canada’s border closed to safety and security threats.”
“It is believed that the subject and the actual United States Citizen passenger (whose date of birth is 1955) performedaboarding pass swap, with the subject using an Aeroplan card as identification to board the flight,” the alert said.
တော်လိုက်တဲ့ လူ.. အဲဒီ လူကို ဒီကို လွတ်ပေးပါ.. face off ရုပ်ရှင်ထဲကလိုများ လုပ်လို့ရ မလားလို့..
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. ဦးကြောင်ကြီး မနေ့ကတော့ အကျီအ၀ါမှာ အမဲ အဆင်းကြားကြီးနဲ့.. ဒီနေ့ အကျီ အညိုကြီး လဲပြီး ခေါင်းစုပ်ဖွားကြီးနဲ့.. ခေါင်းလေး ဘာလေး ဖီးပါအုန်း.. မဲတွေ ဆွယ်ဖို့ သိပ်ပြီး လုပ်ပန်းရတာနဲ့ ခေါင်းစုပ်ဖွားကြီး ဖြစ်နေတာ မေ့နေလားလို့.. သတိပေးတာ..
သွားပြီ စာလုံးပေါင်းမှားသွားပြီ.. ပြင်ဆင် ဖတ်ရှုပါ.. လုပ်ပန်း မဟုတ်ဘူး လုံးပန်း (အာရုံနစ်၍ အစဉ်တစိုက် လုပ်တာ)
ဆူးကလဲ .. အဲဒါ ရုပ်ဖျက်တယ်ခေါ်တယ် …
တော်တော် ကိုး ကောင်းတဲ့ သတင်းပဲ။ မြန်မာပြည်က အတိုက်အခံတွေ အတုယူစေချင်ပါတယ်..။
ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးလ်ရဲ့ တပည့်လို့ အဲဒီကောင်လေးက ပြောပါသတဲ့။